आफ्नै पार्टीको सरकारलाई कांग्रेसले बुझायो ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र, के-के छन् ८ बुँदामा ? खबरमञ्च
आफ्नै पार्टीको सरकारलाई कांग्रेसले बुझायो ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र, के-के छन् ८ बुँदामा ?
२९ पुस, खबरमञ्च, at 6:11 PM
By खबर मञ्च / January 13, 2022 / Comments Off on आफ्नै पार्टीको सरकारलाई कांग्रेसले बुझायो ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र, के-के छन् ८ बुँदामा ?
काठमाडौं । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले सबै नागरिकलाई कोरोनाभाइरसको खोप पुर्‍याउनसहित आठ बुँदे माग राखेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
२ बृद्व-बृद्वा/दीर्घरोगीहरू र बालबालिकाहरू बढी जोखिममा पर्ने हुँदा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।
३ नेपालमा तत्काल सबै नागरिकसामु खोप/बुष्टर पुर्याउनुपर्ने दायित्व र प्राथमिकता नेपाल सरकारको भएको हुँदा पर्याप्त खोप/बुष्टरमा सर्वसाधरणको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सम्बन्धित सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्नका लागि निर्देशन दिने ।
५ स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी एवं कोरोना रोकथामका लागि खटिरहनुभएका ‘फ्रन्टलाइनर’ लाई प्रोत्साहन स्वरुप कोरोना सुविधा/राहत प्रदान गर्दै सर्वसाधारणलाई समेत कोरोना बीमाको व्यवस्था गर्ने ।
६ नयाँ भेरियन्ट फैलन नदिन सिमामा हेल्थ डेक्स, होल्डिङ सेन्टर/आइसोलेसन सेन्टरको समयमा व्यवस्थापन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने ।
८ कोरोना भाइरसलाई फैलन नदिनका लागि आफू र अरुको जीवन रक्षाका लागि जनचेतना कार्यक्रम गरी न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्न/गराउन, कडाईका साथ पहल गर्ने/गराउने ।
Last Modified: January 13, 2022 @ 8:06 pm
स्थानीय तहकाे निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक